အရည်အသွေးမြင့်မားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ | 1D;ONE
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသမဝါယမဖောက်သည်ကုမ္ပဏီ - 1D စက်ရုံ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အားကြီးသောအလင်းအလေးချိန်တိကျစွာအင်ဂျင် 1D Valves
နေအိမ် > သတင်း
ကွမ်ကျိုး, China (Mainland)
Company profile.pdf ဒေါင်းလုပ်
best spark plug manufacturer－SPARK PLUG (Blue Irridium) 2021 Version.pdf ဒေါင်းလုပ်
ထုတ်ကုန် parameters တွေကို
ထုတ်ကုန် features တွေ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်၏ပစ္စတင်သည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း, မြင့်မားသောဖိအားများနှင့်မြင့်မားသောဝန်များ၏အခြေအနေများအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစာတမ်းသည်အဓိကအားဖြင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်ကိုစုဆောင်းခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဆွေးနွေးထားသည်။
1. အသုံးပြုသောလောင်စာအရ၎င်းကိုဓာတ်ဆီအင်ဂျင်, ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပစ္စတင်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပစ္စတင်များအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
1. အနည်းဆုံး inertial အင်အားကိုသေချာစေရန်လုံလောက်သောခွန်အား, တောင့်တင်းသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိရမည်။
2. ကောင်းမွန်သောအပူချိန်မြင့်မားခြင်း, မြင့်မားသောဖိအားနှင့်ချေးခြင်းများကိုခုခံကာကွယ်ခြင်း,
4. အပူချိန်အပြောင်းအလဲများပြောင်းလဲသောအခါအရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ and ာန်ပြောင်းလဲမှုသည်သေးငယ်ပြီးဆလင်ဒါနံရံနှင့်အနိမ့်ဆုံးရှင်းလင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။
အင်ဂျင်ထဲမှာ gasket ကဘာလဲ?
ခေါင်းကို Gasket သည်အင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်ဆလင်ဒါခေါင်းအကြား compressed ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ခေါင်းကို Gasket တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အအေးနှင့်ရေနံသည်အရည်နှစ်ခုကိုအင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှဆလင်ဒါလက်ကိုင် ဦး ခေါင်းသို့ခရီးသွားခြင်းအဖြစ်အတူတကွရောနှောခြင်း မှစ. အတူတကွရောနှောခြင်းမှစောင့်ရှောက်သည်။
အင်ဂျင်ရှိပစ္စတင်ကွင်းများ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ - crank အမှုသို့ဓာတ်ငွေ့များအနည်းဆုံးအရှုံးပေါ်ရန်မီးလောင်ခြင်းကုန်သည်ကြီးများကိုတံဆိပ်ခတ်သည်။ ပစ္စတင်ကနေပစ္စတင်ကနေပစ္စတင်ကနေဆလင်ဒါနံရံအထိ။ ... အင်ဂျင်ရေနံစားသုံးမှုကိုဆလင်ဒါနံရံများမှရေနံကိုခြစ်ခြင်းဖြင့်ခြစ်ခြင်းဖြင့်ထိန်းညှိခြင်း။
သင်၏အအေးသည်အနိမ့်သည်ဆိုပါကများသောအားဖြင့်သတိပြုမိသော်လည်းရေနံနည်းသည်အင်ဂျင်ကိုအပူလွန်ကဲစေသည်။ သင်၏အအေးခံသည့်အဆင့်သည်အဆင်ပြေလျှင်ထိုအရာသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်. အင်ဂျင်တွင်ရေနံအနည်းငယ်သာရှိပါကအအေးခံရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့် ဆက်လက်. အပူဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုများ
OEM သို့မဟုတ် ODM ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများသည်စျေးကွက်အတွက်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖောက်သည်များအတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အမှာစာ / စမ်းသပ်မှုအမိန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။
သင်၏လေးစားမှုရှိသောကုမ္ပဏီအတွက် 24 နာရီ0န်ဆောင်မှုကို 24 နာရီအတွင်းအွန်လိုင်း Almot ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ အင်ဂျင်ကိုဖွင့်လှစ်သောဗဟုသုတတိုးပွားလာသည့်ဒေသတွင်ပါ0င်သည်။ သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထိပ်တန်းထစ်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများက Ultra-Modern Tools နှင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဟာတွေကိုငါတို့ဖောက်သည်တွေဆီပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီဤအရာကိုမြေကွက်အမျိုးမျိုးတွင်စစ်ဆေးသည်။
ပြ issue နာ：Interteck
ပြ issue နာ：Intertek
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုသာပြောပြရုံဖြင့်သင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်ထက် ပို. လုပ်နိုင်သည်။